Nahita ny mombamomba ahy ilay olon-dratsy - Vakio ny Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Nahita ny mombamomba ahy ilay olon-dratsy Average 4.4 / 5 avy amin'ny 14
Faha-95, manana fomba fijery 41.2K
Mamaky ianao Nahita ny mombamomba ahy ilay olon-dratsy, asa tena tsara izay tsy hohadinoinao mihitsy. Miaraka amin'ny atiny mahaliana sy sary mahafinaritra. Azo antoka fa tsy handiso fanantenana anao.
Na dia mpampihomehy kendo taloha aza izy taloha, noho ny lozam-pifamoivoizana iray dia voatery niaina fiainana tsotra izy. Taorian'ny lozam-pifamoivoizana nataon'i Seo Yuri nandritra ny dia nody tany an-trano dia nody vatana vaovao indray izy tao amin'ilay tantara, "The Song of the Moon," ary lasa zoky kambana zokin'olona manana endrika mifanena amin'ny fiafarany manimba - Selena. Manantena i Selena fa hisoroka ny fandringanana ny fianakaviany, na izany aza, noterena hisolo toerana ny zandrin'i Celestine rahalahiny nandositra izy, tao amin'ny sikadron'ny Knights! Ho vitany ve ny hisoroka ny printsy Crown Prince, Ignis ary ho tafavoaka velona ?!
Chapter 55	Jolay 25, 2021
Chapter 54	Jolay 21, 2021
Chapter 53	Jolay 12, 2021
Chapter 52	Jolay 10, 2021
Chapter 51	Enga anie 5, 2021
Chapter 50	Enga anie 2, 2021
Chapter 49	Aprily 24, 2021
Chapter 48	Aprily 14, 2021
Chapter 47	March 19, 2021
Chapter 46	March 8, 2021
Chapter 45	Febroary 28, 2021
Chapter 44	Febroary 25, 2021
Chapter 43	Febroary 25, 2021
Chapter 42	Febroary 25, 2021
Chapter 41	Febroary 24, 2021
Chapter 40	Febroary 24, 2021
Chapter 39	Febroary 24, 2021
Chapter 38	Febroary 24, 2021
Chapter 37	Febroary 24, 2021
Chapter 36	Febroary 24, 2021
Chapter 35	Febroary 24, 2021
Chapter 34	Febroary 24, 2021
Chapter 33	Febroary 22, 2021
Chapter 32	Febroary 22, 2021
Chapter 31	Febroary 19, 2021
Chapter 30	Febroary 12, 2021
Chapter 29	Febroary 12, 2021
Chapter 28	Febroary 12, 2021
Chapter 27	Febroary 12, 2021
Chapter 26	Febroary 12, 2021
Chapter 25	Febroary 12, 2021
Chapter 24	Febroary 12, 2021
Chapter 23	Febroary 12, 2021
Chapter 22	Febroary 12, 2021
Chapter 21	Janoary 23, 2021
Chapter 20	Janoary 18, 2021
Chapter 19	Janoary 18, 2021
Chapter 18	Janoary 12, 2021
Chapter 14	Novambra 15, 2020
Chapter 12	Oktobra 28, 2020
Chapter 11	Oktobra 24, 2020
Chapter 10	Oktobra 15, 2020
Chapter 4	Oktobra 8, 2020
Chapter 3	Oktobra 8, 2020
Tao ambadiky ny varavarana mihidy